Shiinaha Ultrasonic baarista nadiifiye PBD-S3 Soosaarka iyo Warshadda | Doneax
Ultrasound baaritaanka jeermiska ee 'PBD-S3' waa shey jeermis baaris ah oo loo adeegsado noocyo badan oo farsamooyin casri ah. PBD-S2 wuxuu si gaar ah u adeegsadaa tikniyoolajiyadda jeermiska nalka qabow si loogu buuxiyo jeermiska otomaatiga ah ee baaritaanka ultrasound 30-60 ilbiriqsi, taas oo ah mid hufan, dhakhso leh oo bey'adeed u habboon. Waxay xallisaa dhibaatada jeermiska baarista, waxay yareysaa halista infekshinka baaritaanka, waxayna gaartaa tilmaamaha farsamada jeermiska ee hal qof markiiba. Jeermiska isku mar ee laba baaritaan ayaa lagu gaari karaa isla waqti isku mid ah, keydinta kharashka iyo waqtiga iyo ogaanshaha hal-abuurnimo iyo hal-abuurnimo lagu nadiifiyo jeermiska baaritaanka ultrasound!
1. Tilmaanta halbeegga:
1) Korsado UVLED soo noqnoqoshada sare iyo dhererka dhererka tiknoolajiyada jeermiska ultraviolet jeermiska
2) Waqtiga isticmaalka UV UV waa ≥3 sano, iyo baaxada UV-ga waa 250 ～ 280nm.
3) Bartamaha barta tamarta nalka: awoodda iftiinka ee 6cm waa ≥500uw / ​​cm2.
4) Dejinta waqtiga shaqada: 30 iyo 60 ilbidhiqsi.
5) Jeermiska-sare ee jirka ayaa lagu dhammeeyaa 60 ilbiriqsi, heerka nadiifinta bakteeriyada Bacillus waa ≥99.9%.
6) Ku gaaro jeermiga jeermiska ee heerka dhexe 30 ilbiriqsi, E. coli, Staphylococcus aureus, Candida albicans, Mycobacterium chelonae, iwm ≥99.9%.
7) Jeermiska jirka, oo aan waxyeello u geysan muraayadaha indhaha iyo guryaha baaritaanka, iyo dayactirka joogtada ah ee guryaha baaritaanka oo lagu dahaadho jeermiska.
8) Naqshadaynta taangiyada jeermiska lagu dilo ee jeermiska disha jeermiska disha jeermiska disha laba jeer ayaa isku mar la qaadi karaa, midkoodna waa baaritaanka xididka.
9) Dabool buuxa oo otomaatig ah iyo jeermis maskaxeed buuxa.
10) Muujinta dhijitaalka ah ee waqtiga jeermiska.
11) Qaybta baaritaanka waxay leedahay aalad ku dhisan jawi sax ah, oo si otomaatig ah u baareysa inay jirto baaris iyo in baaritaanka meesha la dhigay. Ka dib jeermiska jeermiska la dhammeeyo, looma baahna jeermis dile.
12) Naqshadaynta bini-aadamka, si khafiif ah loo sii daayo, ma saameynayso waqtiga dhakhtarka.
13) Waxay qaadataa meel yar waana sahlan tahay in la dhaqaaqo.
14) Ku habboon caloosha, xubnaha yaryar, wadnaha, siilka, malawadka, baaritaanka intraoperative.
15) Xajmiga martigeliyaha: 430X218X130MM, miisaanka saafiga ah ee qalabka ≤25KG.
16) Xaaladaha shaqada
Heerkulka heerkulka: (5 ～ 40) ℃, qoyaan qaraabo ah: (30 ～ 75)%
Awood koronto: ~ 220V, soo noqnoqoshada korantada: 50Hz
17) Muddada dammaanadda: 12 bilood.
18) Adeegga 7X24 saacadood
Nooca Aaladda nadiifinta Ultraviolet-ka
Lambarka Moodalka PBD-S3
Waqtiga jeermiska la isaga dilo 60 ilbidhiqsi
UV LED Spectral kala duwan 260-280nm
UV LED danab 5.5-7.5V
UV LED Xilligan Ma200ma
Soosaarida tamarta iftiinka ≥10mw
Module UV LED tamarta ≥500μw / cm2 (7cm bartamaha)
Cabbirka martigeliyaha L428mm * W218.8mm * H207.6mm
Cabirka taageerada (aagga, dhererka) 50mm * 50mm, dherer 580-1000mm
Awooda gelinta AC 220V 50HZ
Awood la qiimeeyay ≤90W 50Hz
1) Cusbooneysiin: soo-saar sare oo heer sare ah iyo dherer-dherer dhererkiisu hooseeyo iftiinka ultraviolet oo ay weheliso hababka jeermiska ion ee wanaagsan iyo kuwa xun
2) Soomo: Kaliya waxaad ubaahantahay 30S, 60S si aad udhameyso jeermiga jeermiska jirka lagu dilo ee dhexdhexaadka ah iyo kan sare.
3) Amniga: Jeermis si buuxda otomaatig u ah oo aan faragelin gacan qabasho ah lagu helin, aamin ah oo lagu kalsoonaan karo.
4) Ilaalinta deegaanka: Tikniyoolajiyadda jeermiska lagu dilo ee loo yaqaan 'LED disinfection' waxay leedahay nolol dheer, isticmaalka tamarta oo hooseeya, bey'adduna u fiican tahay.
5) Caqli badan: Si tartiib ah u dhig, adigoon badalin caadooyinka dhaqtarka, jeermiska maskaxda iyo kan otomaatiga ah.
6) aamus go'doomin gaar ah iyo habka shaqada carrab la'aanta buuxda, ma jiraan arrimo faragelinta faragelinta.
Ultrasound Baarista Jeermiska
Gudaha sterilizer-ku wuxuu adeegsadaa UV-ga soo-saarka sare ee UV-ga iyo dherer-dhaadheer oo tiknoolajiyadeed oo nadiifka ah iyo tiknoolajiyadda iftiinka ion, iyadoo la adeegsanayo qalabka haysta koobka, nidaamka kor u qaadista otomaatiga ah iyo dareeraha soo-kicinta ee mashiinka mashiinka, 30 ilbiriqsi, 60 ilbiriqsi. si loo dhamaystiro baaritaanka ultrasonic Dhexdhexaad iyo jeermis dil heer sare ah iyo jeermis dilid, wax ku ool ah, dhakhso leh, bey'adeedna u saaxiib ah, xallinta dhibaatada jeermiska baaritaanka, yareynta halista infekshinka baaritaanka, lana gaaro shuruudaha hal qof, hal adeegsi, hal jeermis qeexida jeermiska
Ka faa'iideysiga xoogaa ah 260nm-280nm qoto dheer ultraviolet iftiinka qabow ee laga helo ultraviolet LED, iftiinka qabow ee ultraviolet wuxuu si dhakhso leh u baabi'iyaa qaab dhismeedka molecular iyo borotiinka DNA (deoxyribonucleic acid) ama RNA (ribonucleic acid) ee unugyada noolaha, taasoo keenta dhimashada unugyada koritaanka. Iyo (ama) geerida unugyada dib usoo nooleynta si loo gaaro nadiifinta. Iftiinka ultraviolet-ka ee qabow wuxuu leeyahay astaamaha kuleylka badan iyo dhererka dhererka, kaas oo hayn kara dusha sare ee shayga la shubay iyadoo aan waxyeello gaarin iyadoo si dhakhso leh looga nadiifinaayo. Ion-yada tamarta sare ee degdega ah iyo kuwa taban waxay gartaan suntan saddexda geesood leh ee jeermiska, waxayna sidoo kale jeermiska ka nadiifin karaan meelaha banaan iyo geesaha qaarkood.
1) 30S, 60S way dhameystiri kartaa jeermiska iyo nadiifinta heerkulka dhexe iyo sare
2) jeermiska jirka, oo aan waxyeello u geysan muraayadaha indhaha iyo guryaha baaritaanka.
3) Jeexitaanka baaritaanka waa la beddeli karaa wakhti kasta iyadoo loo eegayo qaabka baaritaanka.
4) Qaadista otomaatiga ah, shaqada aamusnaanta oo dhan, dhammaan jeermiska caqliga leh.
5) Muujinta dhijitaalka ah ee waqtiga jeermiska.
6) Dareemayaasha infrared-ka waxaa lagu dhisay qeybta baaritaanka, taas oo si otomaatig ah u ogaan karta inay jirto baaris iyo in kale.
7) Ka dib jeermiska jeermiska la dhammeeyo, jeermiska jeermiska laguma celiyo.
8) Naqshadeynta bini-aadamka, ma badasho dhaqanka dhaqtarka ee isticmaalka baaritaannada.
Saldhig 1 gabal
Safka 1 gabal
Baarista saliida 1 dhalo
M10 fur 1 gabal
Buugga tilmaamaha, shahaadada, kaarka damaanada 1 nuqul
Hore: Ultrasonic baarista jeermiska jirka PBD-S1
Xiga: Bakhaarka jeermiga ee qalabka iyo qalabka
3.5 Mhz Ultrasound Baaritaan
Baaritaanka Ultrasound ee Caloosha
Baadhitaanka Ultrasound ee Bluetooth
Baaritaanka Wadnaha ee Ultrasound
Qalabka Ultrasound ee gacanta
Baaritaanka gacanta ee Ultrasound
Mashiinka Caafimaadka Ultrasound
Caafimaadka Ultrasound Transducer
Baaritaanka Caafimaadka Ultrasound
Xajmiga 'Ultrasound Arbe Probe Ultrasound'
Baadhitaanka 'Robotic Ultrasound'
Baaritaanka Ugu Yar ee Ultrasound
Baadhitaanada Mashiinka Ultrasound
Noocyada Baadhista Mashiinka Ultrasound
Baaritaanka Ultrasound-ka ee 'Usb C'
Baaritaanka Usb Ultrasound
Baaritaanka Wifi Ultrasound
Baaritaanka Ultrasound ee wireless-ka ah
Qiimaha Baadhitaanka Ultrasound
Mashiinka qulqulka laminarka hawada ee Mobile AirH-Y2000H
Bakhaarka jeermiga ee qalabka iyo qalabka